Finoana silamo eto Madagasikara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fivavahana silamo eto Madagasikara)
Ny finoana silamo eto Madagasikara dia niorina tamin' ny taonjato faha-7. Nandray anjara betsaka tamin' ny fiforonan' ny maha Malagasy ny Malagasy ankehitriny izy. Ny fikarohana nataon' ny Pew Research Center tamin' ny taona 2010 dia manambara fa ny 1,1%n' ny mponina eto Madagasikara dia Miozolmana. 7% kosa izany araka ny The World Factbook - Madagascar. Tamin' ny taona 2020 dia eo anelanelan' ny 10% sy 13%n' ny mponin' i Madagasikara ny Miozolmana eto amin' ny Nosy. Ny ankamaroan' ny Miozolmana eto Madagasikara dia manaraka ny finoana silamo sonita avy amin' ny sekoly Shafý, niaraka tamina mpino Ahmadý vitsy izay nanorim-ponenana tamin' ireo taona 1980 izay enjehin' ireo Sonita fondamentalista sy ireo Siita.
2 Taorian' ny fanjanahan-tany frantsay
Ny fahatongavan' ny Arabo teto MadagasikaraModifier
Ny lova tamin' ny AraboModifier
Taorian' ny fanjanahan-tany frantsayModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Finoana_silamo_eto_Madagasikara&oldid=1019271"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 23:51
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 23:51 ity pejy ity.